musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Aeroflot inoda kuti Vatyairi kuti vabaiwe jekiseni
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Health News • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • Russia Kuputsa Nhau • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Vatanhatu vatyairi veAeroflot vanoramba COVID-19 jabs, yakamiswa pasina mubhadharo
Vatyairi vatanhatu vanoshandira ndege huru yeRussia yepasi rose vakaiswa pasi uye vakamiswa kubva pabasa pasi pemitemo inobvumidza makambani kudzinga mushe vashandi vanoramba kusaina mushonga wekudzivirira hutachiona hweCOVID-19.
Aeroflot inomisa vatyairi nekuda kwekuramba COVID-19 jabs.
Vakamiswa mutyairi wendege vakaramba kusaina mushonga wekudzivirira coronavirus.
Mutyairi wendege akanyunyuta kuna Aeroflot CEO, achiti kumiswa kusarura.
Ndege yeRussia inomira ndege yeAeroflot, inova yakawanda-nyika yeRussia, yakatumira vatyairi vatanhatu vasina kubayiwa majekiseni pazororo risina kubhadharwa kana pazororo vasina mubhadharo, mutauri wemutakuri akadaro.
Mutauriri we Aeroflot akataura kuti vatyairi vatanhatu vakaiswa pazororo rekurwara, pasina muripo, nekuti ivo vakasarudza kusagamuchira jab. Nekudaro, huwandu hwevatyairi vakamiswa hwaive hushoma uchienzaniswa nehukuru hwese hwevashandi veAeroflot, pamwe nevatyairi vengarava mazana maviri nemazana matatu mumakambani emakambani.
Vashandirwi vevashandi vepareti vakanyunyuta kuna Aeroflot CEO Mikhail Poluboyarinov nerusarura, vachipokana kuti vasina kuvharirwa vachengeti vendege nevashandi vetsigiro havana kusangana nekudzingwa kwakafanana.
Igor Delduzhov, Mutungamiri we Sheremetyevo Trade Union yeVashandi Vendege, iri kuAeroflot kuMoscow hub airport, yakarova danho rekubvisa vashandi vendiza. Sekureva kwake, mhinduro ine hukasha kune avo vanosarudza kusabaiwa jekiseni haina mvumo, yakapihwa vangangoita 84% yevashandi vanonzi vakatove nhomba.
"Hakuna imwe ndege yendege yeRussia inomiswa zvakafanana," akadaro Deldyuzhov mutsamba iri pawebhusaiti yemubatanidzwa.